EmebeFreeMart rụọ ọrụ ™ | Ọkọwa Okwu Ahụike
2 TinyeFreeFreeMart Mee ọ rụọ ọrụ
3 Mmetụta Ọ Kpachapụghị Anya.
4 Ọrụ nke Bifidobacteria.
5 Ndi shopFreeMart na-eme ọfụma?
6 Etu ị ga-esi were ahịaFreeMart rụọ ọrụ.
8 Njikọ posts:
TinyeFreeFreeMart Mee ọ rụọ ọrụ
bụ ngwakọta nke nri Chitin / Chitosan oligosaccharide sitere na vitamin e mebere iji belata fungal-candida, bawanye bifidobacteria na eriri afọ, belata mgbakasị afọ, belata shuga ọbara / ọbara mgbali elu / LDL cholesterol na oke ibu, igbochi nnabata abụba, ịkwado ụra izu ike, melite sistemụ mgbochi / ọrụ akụrụ / ọrụ akụrụ na mgbaze, rụọ ọrụ ma mee ka ikike eletrik nke sel yana ọcha dị ọcha.
A na-eme chitosan oligosaccharides site na shei achara achara nụchara anụcha ma bụrụkwa nri eji eme nri nke a ga-emeri. Ndị polima shuga isii a nwere ike ịnagide okpomọkụ na acid ma nwee ike ịbịaru anụ ahụ ebe enzymes ahụ mebiri ma nyefee anụ ahụ niile ka ha sachapụ ihe mkpofu, nke a na-eme ka ha rụọ ọrụ nke ọma.
Na Japan, a na-ekwu na chitin / chitosan na-arụ ọrụ dị ka “ndị na-eme ka mkpanaka cell” n'ihi ike dị ukwuu na ikike nhicha ya. A na-eji ụdị oligosaccharide chitosan na Japan na-agwọ ọrịa dịka ọbara mgbali elu, ọrịa shuga, cholesterol dị elu, ọrịa na-egbu mgbu, ọrịa imeju na ndị ọzọ, n'ihi ikike ya nwere ike jikọta ya na abụba, mmanụ na mkpo ahụ.
Mmetụta Ọ Kpachapụghị Anya.
Mmụba nke nje ndị na-emerụ ahụ na-ebelata ikike nke anụ ahụ iji nwetakwa calcium n’ọkpụkpụ anụ ahụ na akwara n’ihi ike ị na-agbari na-enweta abụba na nnu. Nje bacteria na-emerụ ahụ nwere ike ibute ọrịa dịka ọrịa kansa, arteriosclerosis, ọrịa shuga na ụfọdụ ọrịa autoimmune. Na-enweghị ihe kwesịrị ekwesị nguzozi na aka, nje na-emerụ ahụ na nje yist dị ka Candida Albicans na-ahapụ ikike ito eto site na nchịkwa. Ebe ọ bụ na yist bụ ihe dị ndụ nke na-abanye ihe mkpofu n'ime ahụ, echere na uto uto nke Candida na-akpata ọtụtụ nsogbu ahụike sitere na vaginitis, oke-emetụta ero na akpụ, nsogbu iku ume, ihe otutu, isi ọwụwa, enweghi ike ifelata, edema, ike ọgwụgwụ, afọ ntachi / afọ ọsịsa ịkpọ naanị ole na ole. N'ihi na chitin / chitosan oligosaccharides na-ehicha ahihia site na sel ma na-eme ka uto nke ezigbo nje bacteria, enwere ike ịtụle ya dị ka nri na-emegide candida.
Ọrụ nke Bifidobacteria.
Ngwakọta ụmụ mmadụ nwere ọtụtụ ijeri bakteria (ihe ọma na ihe ọjọọ) nke na-enweta nri na-edozi ahụ. Bifidobacteria bụ nje bara uru nke na-elekọta idobe nguzosi ọcha. Nnukwu ọnụnọ nke nje a dị mkpa maka ịmegharị bowel nkịtị, mgbaze nke protein yana ịgbanye vitamin B nke vitamin ngwa ngwa.
Nchegbu, ọgwụ nje, nri na-adịghị mma, ihe mgbakwunye nri, mmiri chlorinated na fluorid, mmiri ara ehi a nụchara anụcha na ngwaahịa ntụ ọka, ọgwụ mgbochi ọmụmụ bụ ọgwụ ole na ole n’ime ihe ndị na-egbu nje dị mma ma na-ekwe ka nje ndị na-emerụ ahụ na-eto. Ndị nwere ọnụnọ dị elu nke nje a na-enwe nsogbu gastric, ma na-enwekarị ọrịa na-adịghị ala ala n'ihi nchebe dị elu.
Ndi shopFreeMart na-eme ọfụma?
Ndị nwere nsogbu azụ azụ kwesịrị ịmalite nwayọ nwayọ ma ọ bụ kpọtụrụ dọkịta tupu ha ewere. Enweghị mmetụta ọ bụla amaara ebe ọ bụ na chitosan na njeri oligosaccharide sitere na shei ahụ, ọ bụghị anụ nke azụ shei ahụ. Enweghịkwa mmetụta ọ bụla ama ama mgbe ị withụ ọgwụ. ShopFreeMart Tinye bụ ngwaahịa nri abụghị ọgwụ ogwu ma ọ bụ ọgwụ mana enweghị nsí.
Etu ị ga-esi were ahịaFreeMart rụọ ọrụ.
Ọ bụrụ na ị na-achọ ifelata, TinyeFreeFreeMart Mee ọ rụọ ọrụ ekwesịrị iwere oge 3 kwa ụbọchị nkeji oge 30 tupu nri ya na 8 ma ọ bụ karịa ounce mmiri. Ọ bụrụ n need adịghị mkpa ịdị na-egbochi iri nri, were otu iko mmiri were n'etiti nri gị.
Asaoka, Koji. Mutsuoki Kai sụgharịrị.
Chitin-Chiosan Ihe mgbakwunye nri nri maka ndị dibịa 10,000 na Japan.
Yụa na etu ha ga - esi mee ka ị daa Ọria.
Akwụkwọ Ndị Ọkachamara.
Ọrịa artery - ọgwụgwọ nkịtị
Ọgwụ Ọjọọ - Ọgwụ Ọrịa na Ọgwụ
Ihe na rụọ ọrụ, Ngwaahịa SFMakpado ọrịa mgbasi akwara, ọrịa autoimmune, bifidobacteria, candida albicans, Chitin, Chitosan oligosaccharide, ọrịa cancer, Ọchịchị enweghị nchekasị, ọrịa shuga, edima, oligosaccharide, zụọ ahịa free mart, zụọ ahịa free mart n'ọrụ, shopfreemart, shopfreemart rụọ ọrụ, shopfreemart reviews, vaginitis
Udiri igwọ oke mkpa: Ndekọ #1 dị ịtụnanya